‘किन घुस माग्नु भो?’ भन्दा कुटपिट (हेर्नुहोस महानगर प्रहरीको दुर्व्यवहार) - लुम्बिनी समाचार
‘किन घुस माग्नु भो?’ भन्दा कुटपिट (हेर्नुहोस महानगर प्रहरीको दुर्व्यवहार)
काठमाडौं। सडक किनारामा ठेला राखेर वदाम बेच्ने युवालाई महानगर प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको छ । बा १ झ ९७१७ नम्बरको महानगर प्रहरी लेखिएको गाडीमा सवार प्रहरीबाट एक युवामाथि कुटपिट भएको हो।
बानेश्वरको सडक किनारामा ठेला राखेका युवाको सामान जफत गरेर गाडीमा राखेपछि ती प्रहरी महिलाले युवासँग दुईसय रुपैयाँ मागेकी थिइन्। पैसा पाए सामान फिर्ता दिने भन्दै आफूसँग पैसा मागेको ती युवाले उपस्थित भिडमा बताएका थिए।
ती युवाले पोल खोल्न थालेपछि प्रहरीले उनलाई गाडीमा कोचेर लैजान लागेका थिए। तर ती युवाले मानेनन्, प्रतविाद गरे। मसँग कति पैसा मागेको ? भन्दै र्याखर्याख्ती पारेपछि ती प्रहरी महिला र उनका चालक एकाएक भड्किएका थिए । त्यसपछि प्रहरीको दुर्व्यवहार बढेर कुटपिटसम्मै हुन पुग्यो।
अफूमाथि अन्याय भएको भन्दै जोरसोरले प्रतिवाद गरेका युवामाथि प्रहरी कुटपिटमै उत्रिएपछि युवाको केही चल्दैन। ठेलामा बदाम बेच्ने ती युवाको मुख्य गुनासो थियो– ‘मसँग किन दुईसय माग्नु भो?’ त्यसमाथि अरु प्रहरी पनि थपिएपछि युवा निरिह भएर बाटो लाग्छन्।
जुटेको भिडले ‘दुःख गरेर खाने एकजना युवालाई खुलेआम लछारपछार पारेर कुटपिट गर्ने अधिकार तपाइँलाई छ?’ भन्दै महानगरका ती प्रहरीलाई प्रश्न गरेपछि प्रहरी झनै आक्रोशित बनेकी थिइन्। दुःख गरेर खाने आफ्नो सामान जफत भएको, त्यसमाथि घुस मागिएको र आवाज उठाउँदा कुटिनु परेको भन्दै ती युवा रुँदै त्यहाँबाट हिडेका थिए।
महानगर प्रहरी कार्यालयबाट नयाँ बानेश्वरमा खटिएका प्रहरीले एकजना युवालाई बीच सडकमै हातपात गर्दैगरेको दृश्य यो भिडियोमा छ।
शैक्षिक भ्रमण बन्यो व्यवहारिक सिकाई र यसको कार्यान्वयन मार्गदर्शक।
हिमाल देखि समुन्द्र सम्मः यात्रा संस्मरण
महानायक राजेश हमालको नजरमा केपी ओलीः आशा गर्न लायक ‘राष्ट्रनेता’
कसैको दवाब आउँदैमा संविधानविरुद्ध नजाने रास्ट्रपति भण्डारीको अडान
अन्तत भारतसंग झुकेनन् प्रचण्ड ! प्रचण्डको कुरा सुनेर भारतीय राजदूत रातोपिरो र चकित बने ! के भने प्रचण्डले ?